Ọnọdụ Multi-window agaghị arụ ọrụ na ndabara na Nexus | Gam akporosis
Ọ dịla ogologo okwu gbasara enwere ike ịnweta ọnọdụ desktọọpụ na gam akporo N. Ọ dịkarịa ala enwere ike ịnweta ma ọ bụrụ na ị banye n'ime koodu ahụ, nke dugara n'echiche na ị nwere ike ịnwe nhọrọ iji nke a mode na nnukwu ihuenyo iji imitateomie ihe enwere ike ịme na kọmpụta desktọọpụ, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ihe anyị na-ahụ na Remix OS. A Remix OS na anyi ahuru na nso nso a ngwaọrụ ọhụrụ ole na ole.
Ọ bụ ezie na anyị nwere olile anya ịmata n'oge na-adịghị anya aha ikpeazụ nke gam akporo N, ọtụtụ atụmatụ ndị anyị na-amata, ebe ọ bụ na ọ dị ka ha agaghị anọ naanị na ndị ahụ anyị hụrụ na nsụgharị mbụ nke nke mbụ maka ndị mmepe. Otu n'ime ihe ndị kacha pụta ìhè bụ otutu window, ma o yiri ka anyị ga-echere n'ihi na ọ gaghị apụta na ụlọ ọrụ gọọmentị na-abata site na gam akporo N, ọbụlagodi na ngwaọrụ Nexus.
Dị ka anyị kwurula, gam akporo N ga-enwe multi-window mode support, ma ọ bụ naanị n’ụzọ a kpaara ókè. Nke a pụtara na ị nwere ike ịgbalite nhọrọ a nke ga-etinye ngwa ndị ahụ n'akụkụ ibe ha ka ọ na-eme na ngwaọrụ Samsung. N'ụzọ dị otú a, a na-arụ ọrụ ọtụtụ ọrụ, nke na-eme nke na-agaghị adị na eze.
Ndị na-emepụta ihe ga-arụ ọrụ Njirimara a na ekwentị ha chọrọ, mana Google agaghị eme ya kpọmkwem maka ngwaọrụ Nexus ọ bụla na nsụgharị gọọmentị nke ọ wepụtara nke gam akporo N. Ọ ga-ahapụ onye ọrụ iji nwee ike itinye ya na omenala ROM, nke ga-ekwe ka ndị gam akporo na-elekọta ya iji nye ọnọdụ a ọtụtụ windo.
Anyị na-ekerịta vidio ahụ nke Google na-ekwu maka atụmatụ nke ọnọdụ a maka gam akporo N.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Android N agaghị enye ọnọdụ ọtụtụ windo na ndabara na Nexus